Xukuumadda Soomaaliya Oo Guddi U Saartay Aaska Raysul Wasaarihii Hore C/rizaaq Xaaji Xuseen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya C/weli Sheek Axmed Maxamed ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee C/risaaq Xaaji Xuseen oo ku geeriyooday dalka Maraykanka.
Isagoo ku hadlaya Magaciisa, kan Xuumadda iyo kan shacabka Soomaaliyeed ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday Ra’iisul wasaarihii hore iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxana uu ugu duceeyey in Illaah janadii Fardowso ka waraabiyo. Ra’iisul Wasaare C/weli ayaa qabanqaabada aaska qaran ee loo samaynayo C/risaaq Xaaji Xuseen u magcaabay guddi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare-ku-xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Ridwaan Xirsi Maxamed.
“Innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun, maanta ummadda Soomaaliya waxaa ka tegay mid ka mid ah geesiyaashiisii iyo halgamayaashiisii naftooda u hibeeyey u adeegidda qarankan, quluubteennu waxa ay la jiraan isaga iyo qoyskiisa. Waxaan uga tacsiyeynayaa geeridan naxdinta leh dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka geeriyooday Marxuum C/risaaq Xaaji Xuseen” Sidaasi ayuu yiri Ra’iisul Wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Ra’iisul Wasaare C/weli Sheekh Axmed isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu raaciyey “C/risaaq Xaaji Xuseen waxa uu ahaa halgamaa iyo waddani u soo dagaalamay xorriyadda, waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii SYL ee xorriyadda, waxa uu xilal kala duwan iyo shaqooyin u soo qabtay qarankan weyn ee Soomaaliya waxana ugu muhiimsanaa xilka Ra’iisul Wasaaraha. markii uu soo baxay warka geeridiisu, waxaannu ka hawlgalnay sidii aan u gudan lahayd waajibaadka qaran ee naga saran, waxana aan u xilsaaray guddi qabanqaabinaya aas qaran”
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee C/risaaq Xaaji Xuseen waxa uu madaxa xukuumadda ahaa sannadihii 1964-tii ilaa 1967-dii, isagoo soo noqday xorriyad-u-dagaalame, shaqaale dowladeed iyo siyaasi ruug-caddaa ah oo ku sifoobay wadani-jacayl iyo ku dhagganaanta midnimada Soomaaliya. Maanta wuu innaga tegay laakiin dhaxalkiisa waaraya ayaa innoo haraya.